एप्पल वाचमा अनुप्रयोगहरू कसरी डाउनलोड गर्ने: पूर्ण मार्गनिर्देशन! - एप्पल वाच
iphone6प्लस टूट स्क्रीन
कसरी आईफोन मा भविष्यवाणी पाठ हटाउन
कसरी आईफोन मा अपडेट प्रमाणीकरण रोक्न
एप्पल वाचमा अनुप्रयोगहरू कसरी डाउनलोड गर्ने: पूर्ण मार्गनिर्देशन!
तपाईं आफ्नो एप्पल वाचमा अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ, तर कसरी पक्का हुनुहुन्न। अनुप्रयोगहरू बिना नै तपाईको एप्पल वाच मूल रूपमा अन्य कुनै पनि बोरिंग, पुरानो घडी जस्तै छ! यस लेखमा, म गर्नेछु तपाइँको एप्पल वाचमा अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न तीन तरिकाहरू देखाउनुहोस् ।
एप्पल वाचमा अनुप्रयोगहरू कसरी डाउनलोड गर्ने
वाच एप्पमा तपाईको एप्पल वाचमा अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न तीन तरिकाहरू छन्:
किन मेरो भ्वाइस मेल काम गर्दैन
मेरो वाच ट्याबमा उपलब्ध अनुप्रयोग सूचीबाट।
एप्पल वाच अनुप्रयोग स्टोर बाट।
एप्पल वाच अनुप्रयोग स्टोर खोज उपकरण प्रयोग गरी।
तल, म तपाईंलाई यी तीन विधिहरू मध्ये प्रत्येकमा हिंड्नेछु ताकि तपाईं आफ्नो एप्पल वाचमा अनुप्रयोगहरू कसरी स्थापना गर्ने सिक्न सक्नुहुन्छ।
कसरी मेरो वाच ट्याबबाट एप्पल वाच एप्स डाउनलोड गर्ने
वाच अनुप्रयोग खोल्नुहोस् तपाईंको आईफोनमा।
ट्याप गर्नुहोस् मेरो घडी ट्याब र तल स्क्रोल गर्नुहोस् उपलब्ध अनुप्रयोगहरू ।
सुन्तला ट्याप गर्नुहोस् स्थापना गर्नुहोस् तपाईको एप्पल वाचमा स्थापना गर्न चाहानुहुन्छ अनुप्रयोगको दायाँ बटन।
एउटा सानो स्थिति सर्कल देखा पर्नेछ कि तपाईको एप्पल वाचमा अनुप्रयोग स्थापना गर्न को लागी कती नजिक छ।
मेरो एप्पल वाच मा, प्राय: अनुप्रयोग को स्थापना पूरा गर्न केहि मिनेट लिन सक्दछ, त्यसैले धैर्य गर्नुहोस्!
अनुप्रयोग स्टोरमा एप्पल वाच एप्स डाउनलोड गर्ने तरिका
स्क्रिनको तल अनुप्रयोग स्टोर ट्याब ट्याप गर्नुहोस्। जब तपाईं ट्याब निलो बन्छ तब तपाईले एप्पल वाच अनुप्रयोग स्टोरमा हुनुहुन्छ भनेर थाँहा पाउनुहुनेछ।
तपाईंले स्थापना गर्न चाहानु भएको अनुप्रयोग फेला नपरेसम्म एप स्टोरको वरिपरि ब्राउज गर्नुहोस्
ट्याप गर्नुहोस् पाउनुहोस् अनुप्रयोगको दायाँ तिर तपाई डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ।
डाउनलोड यकिन गर्नुहोस् तपाईंको पासकोड, टच आईडी, वा फेस आईडी प्रयोग गर्दै।
डाउनलोड पुष्टि भएपछि, एउटा सानो स्थिति सर्कल देखा पर्नेछ अनुप्रयोगको दायाँ तिर।
कसरी खोजी उपकरण प्रयोग गरी एप्स वाच अनुप्रयोग डाउनलोड गर्ने
वाच अनुप्रयोग खोल्नुहोस् ।
मा ट्याप गर्नुहोस् खोज्नुहोस् स्क्रिनको तल दायाँ कुनामा ट्याब।
खोजी बाकसमा ट्याप गर्नुहोस्।
तपाईको एप्पल वाचमा स्थापना गर्न चाहानुहुन्छ अनुप्रयोगको नाममा टाइप गर्नुहोस्।
ट्याप गर्नुहोस् खोज्नुहोस् तपाईंको आईफोनको कुञ्जीपाटीको दायाँ-कुनामा तल।
ट्याप गर्नुहोस् पाउनुहोस् यो स्थापना गर्न सुरू गर्न अनुप्रयोगको दायाँ तिर।
तपाईंको आईफोन पासकोड, टच आईडी, वा फेस आईडीको साथ अनुप्रयोग डाउनलोड यकिन गर्नुहोस्।
स्थिति सर्कलले तपाईलाई यो थाहा दिनको लागि देखा पर्दछ कि अनुप्रयोगलाई स्थापना गर्न यसले कति लामो लिन्छ।
एप्पलले अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गरिसके पछि उनीहरू कहाँ छन्?
एकचोटि तपाईंले आफ्नो एप्पल वाचमा अनुप्रयोग वा अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्नु भएपछि, तपाईं यसलाई डिजिटल क्राउन (तपाईंको एप्पल वाचको छेउमा गोलाकार बटन) ट्याप गरेर हेर्न र खोल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ, तपाइँ तपाइँका सबै अनुप्रयोगहरू प्रदर्शित भएको एक मेनू देख्नुहुनेछ।
तपाईंले भर्खर स्थापना गर्नुभएको अनुप्रयोग खोल्नको लागि यसमा ट्याप गर्नुहोस्। अनुप्रयोग आइकनहरू ट्याप गर्न गाह्रो हुन सक्छ किनभने तिनीहरूको सानो छ, तर तपाईं डिजिटल क्राउन घुमाएर जूम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले स्क्रिनमा आफ्नो औंला स्लाइड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंले अनुप्रयोग जूम गर्नु भए पछि खोज्नु भएको अनुप्रयोगलाई सहयोग गर्नका लागि।
हालसालै डाउनलोड गरिएका अनुप्रयोगहरू प्राय: दाहिने वा टाँसको हेराइ अनुहारको दायाँ तिर देखा पर्दछन्।
एप्पल वाचमा एप्स डाउनलोड गर्दै: वर्णन गरिएको!
अब तपाईलाई थाहा छ तपाईको एप्पल वाचमा एप्स डाउनलोड गर्ने बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा। म तपाईंलाई यो लेख सोशल मीडियामा साझा गर्न प्रोत्साहन गर्दछु तपाईंको परिवार र साथीहरूलाई एप्पल वाचमा कसरी अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्ने भनेर सिकाउन। मलाई तपाईंको मनपर्ने एप्पल वाच अनुप्रयोगहरू बारे बताउनुहोस् तल टिप्पणी दिनुहोस्!